ICheetah Digital: Ungabenza njani abaThengi kuQoqosho lweTrasti | Martech Zone
ICheetah Digital: Ungabenza njani abaThengi kuQoqosho lweTrust
NgoMvulo, nge-25 kaJanuwari, 2021 NgoMvulo, nge-25 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Abathengi bazakhele udonga ukuze bazikhusele ngokuchasene nabadlali abangalunganga, kwaye bayiphakamisile imigangatho yabo yeempawu abazisebenzisela imali yabo.
Abathengi bafuna ukuthenga kwiimpawu ezingabonakalisi uxanduva lwasentlalweni kuphela, kodwa bekwaphulaphula, bacele imvume, kwaye bathathe imfihlo yabo ngokungathí sina. Le yinto ebizwa ngokuba yi ithemba loqoqosho, kwaye yinto yonke imveliso ekufuneka ibenayo ngaphambili kwisicwangciso sabo.
Ngabantu ababonakaliswe ngaphezulu kwemiyalezo yokuthengisa engama-5,000 yonke imihla, iimveliso kufuneka zizame ukwenza loo mzuzu wobugqi othimba ingqalelo kwaye uququzelele ukubandakanyeka ngokuthe ngqo kubathengi. Kodwa zingathengiswa njani iimveliso zentengiso kwintengiso ingxolo Ngaphandle kokonakala?
Impendulo kukubonelela ngotshintsho lwexabiso elibonakalayo. Inkqubo ye- Ixabiso lokutshintshiselana kulapho abathengisi banikezela abathengi ngento ngembuyekezo yokuzibandakanya, ukubandakanya, kunye nedatha yokukhetha. Kwaye akusoloko kufanele ukuba ibe sisaphulelo okanye ibhaso elibhalwe ngonobumba obomvu; Umxholo okhethekileyo, i-kudos yentlalontle, iingcebiso ezizezakho, kunye neendawo zokuthembeka zinokuba sisiseko sokuqokelelwa kokungena kunye nokuzichaza ngokwakho, idatha yeqela elingu-zero.
Iibhranti kufuneka ziyeke ukuthenga i-dodgy, idatha yomntu wesithathu, kunye nokuqokelela abathengi, kwaye endaweni yoko zizabalazele ukuthembeka, ngokuthe ngqo, kunye nolwalamano oluxabisekileyo kunye nabathengi. Ayisiyiyo le kuphela ukunika uphawu kumda, kodwa ukubonelela ngotshintshiselwano ngexabiso ekubuyiseni idatha yabathengi, ukubandakanyeka, kunye nokunyaniseka kwenza ukuba ii-brand zinxibelelane ngokuthe ngqo kunye nabathengi kwaye ziqhube amanyathelo angaphezulu.
Nawuphi na umthengisi olungileyo uyazi ukugqwesa kwiminyaka yomthengi konke malunga nokwenza amava eempawu ezenzelwe ukuba zithethe ngqo kwiimfuno zabathengi. Kodwa ngelixa bonwabela ubumnandi kunye nokubaluleka okuziswa yile ntetho, abathengi bayakhawuleza ukubamba idatha yabo kwaye bafuna ukwanda kweemfihlo kwi-Intanethi. Le ngxaki iba mandundu ngakumbi kukuvela kwezikrelemnqa ezikhulu zokuthembela kunye nokophuka kwedatha okukhokelela kwimithetho nemigaqo ekhuselekileyo yokhuseleko lwedatha. Kodwa idatha yobuqu kunye nentengiso ekujoliswe kuyo ihamba-ngesandla.
Ke umthengisi makenze ntoni? Le yi indida yabucala. Abathengi kwangaxeshanye balindele ukuba bucala kunye namava eempawu ezenzelwe bona. Ngaba kunokwenzeka ukuhambisa kuzo zombini? Impendulo emfutshane yile ewe. Ngendlela entsha yokufumana idatha yabathengi, ukuzibophelela kukhuseleko kuwo onke amanqanaba ombutho, kunye nokuqina, isimo sengqondo esisebenzayo kulawulo lomngcipheko, iimveliso zinokuhlangabezana nokulindeleka kwabathengi ekubonakaleni nasekulawuleni, ngelixa besonwabile ngamava abo ngedatha.
ICheetah Digital sisisombululo somthengi sokunxibelelana nesisombululo somthengi wentengiso yanamhlanje. I-Cheetah iyaqonda ukuba iimveliso zanamhlanje zifuna izisombululo zokubonelela ngokhuseleko, amandla e-cross-channel, amaxabiso oomatshini bokutshintshiselana, kunye namava abhalwe ngokwenyani abathengi abalindeleyo.
Kwangoko kulo nyaka, iCheetah Digital yayi Yaziwa ngeqonga layo lokunyaniseka kwaye usebenza neeVans. Ixhaswe yiCheetah Ukunyaniseka, iiVans zenze iVans Family, inkqubo yokunxibelelana enomdla kunye ne-intuitive eyilelwe ukwamkela, ukuvuza, kunye nokubhiyozela abalandeli ukuba bangobani kwaye bathanda ukwenza ntoni. Inkqubo iququzelela iincoko zendlela ezimbini nabathengi.
Amalungu afikelela kwimincintiswano ekhethekileyo kunye namava, izihlangu ezenziwe ngokwezifiso kunye nezixhobo, kunye nokujonga kwangaphambili kokukhutshwa kwemveliso ezayo. Ukongeza, amalungu afumana amanqaku ngokuthenga kunye nokuzibandakanya nophawu. Kwisithuba esingaphantsi kweminyaka emibini, iiVans zitsale ngaphezulu kwamalungu ezigidi ezili-10 kwiVans Family eMelika kwaye amalungu enkqubo achitha ama-60 epesenti ngaphezulu kunabantu abangengawo amalungu.
I-Cheetah Digital Customer Engagement Suite
I-Cheetah Digital Customer Engagement Suite yenza amaxesha exabiso phakathi kwabathengi kunye neempawu. Idibanisa ubunzulu kunye nobubanzi beqonga ledatha elomeleleyo kunye nexesha langempela, amandla omnqamlezo wendlela yokusebenza, kwisisombululo esinye esimanyeneyo. ICustomer Engagement Suite ibandakanya:
Amava engwenkala - Ukuhambisa amava okufumana abathengi asebenzisanayo asebenzayo enza ukuba iimveliso ziqokelele idatha yokuqala kunye neqela, kwaye zikhusele iimvume ezixabisekileyo ezifunekayo zokuphumeza iikhampasi zentengiso ezihambelanayo neziphumelelayo.
Imiyalezo Cheetah -Nika amandla abathengisi ukuba benze kwaye bahambise imikhankaso yokuthengisa efanelekileyo, eyenzelwe wena kuwo onke amajelo kunye neendawo zokuchukumisa.
Ukunyaniseka kwe-Cheetah - Inika abathengisi izixhobo zokudala kunye nokuhambisa iinkqubo ezizodwa zokunyaniseka ezivelisa unxibelelwano ngokweemvakalelo phakathi kweempawu kunye nabathengi bazo.
Iqonga ledatha yokuzibandakanya ne-Cheetah -Isiseko sedatha esisiseko kunye ne-injini yokwenza ubuqu eyenza ukuba abathengisi baqhube idatha ukusuka kulwazi olunobukrelekrele ukuya kwinqanaba ngesantya kunye nomlinganiso.
Ngabathengi abangama-3,000, abasebenzi abayi-1,300, kunye nobukho kumazwe ali-13, iCheetah Digital inceda abathengisi bathumele imiyalezo engaphezulu kwesigidi esinye ngosuku.
Thetha kugqirha weDijithali
tags: ingwenkala yedijithaliIqonga ledatha yokuzibandakanya kwengwenkalaamava engwenkalaukunyaniseka kwengwenkalaImiyalezo yengwenkalaukufunyanwa kwabathengiIinkcukachaemail MarketingUmboneleli wesevisi ye-imeyileespIinkqubo zokunyanisekaNgokwezifisowabucalaindida yabucalaithemba loqoqoshoIxabiso lokutshintshiselana
Amaqhinga ama-3 oLungelelwaniso lokuThengisa nge-imeyile olonyusa amaxabiso okuGuqulwa
Ezona Plagi zeWordPress ziBalaseleyo kwiSayithi lakho leShishini